အထူ acrylic စာရွက်
Clear ကို acrylic စာရွက်
ကြေးမုံ acrylic စာရွက်
Frosted acrylic စာရွက်
သန့်ရှင်း acrylic စာရွက်
anti-တောက်ပ acrylic စာရွက်
anti-Scratch acrylic စာရွက်
anti-တည်ငြိမ်သော acrylic စာရွက်
Fireproof acrylic စာရွက်
ပျံ့ acrylic စာရွက်
တောက်ပနေ acrylic စာရွက်
စကျင်ကျောက် acrylic စာရွက်
pattern acrylic စာရွက်
ပုလဲ acrylic စာရွက်
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ acrylic စာရွက်
Clear ကို acrylic Tube
အရောင် acrylic Tube
ပျံ့ acrylic Tube
အကြီးစား acrylic Tube
အလင်းကိုလမ်းညွှန် acrylic Tube
Clear ကို acrylic လှံတံ
အရောင် acrylic လှံတံ
အလင်းကိုလမ်းညွှန် acrylic လှံတံ
pattern acrylic လှံတံ
လိမ် acrylic လှံတံ
အနုပညာ & Craft
ပရိဘောဂ & ရေချိုးခန်း
အလင်းရောင် & Decoration
ဆိုင်းဘုတ် & ပြရန်
How To Perform Acrylic Processing
Acrylic products are widely used in different occupations. In our daily life, acrylic products are also everywhere. In recent years, acrylic processing skills are constantly innovating and improving. How do you perform acrylic processing? Acrylic processing generally selectsalaser incision meth...
The Precautions Use Of Acrylic Swimming Pool
The precautions use of acrylic swimming pool as following, 1. Acrylic swimming pool can not exist in the same place as other organic solvents with bright and colorless liquids. 2. Do not touch organic solvents. Once you touch the exterior of the acrylic swimming pool, it may be damaged. 3. During...
The current aquarium project is inseparable from the acrylic tunnel, which is used to display large-scale marine animals, making people feel like they are inadreamy sea world. Because of acrylic’s plasticity, Acrylic isaprofessional choice in the production of subsea tunnels. Acrylic ...
The Methods Of Processing Acrylic Tube
Acrylic tube processing and manufacturing methods as following: 1. Hot pressing method After heating the acrylic sheet, it is hot pressed in the mold. The handicrafts made by this type of appearance have the characteristics of fullness, curved circulation, strong three-dimensionality and relief....
The Performance of Large Acrylic Fish Tank
1. The large acrylic fish tank is extremely shock-resistant, 16 times that of ordinary material glass, and hasalonger service life than ordinary common material fish tanks. 2. Generally, the glass aquarium hasarelatively heavy weight. The large acrylic fish tank hasalight weight. The weight...
acrylic ငါး Tank ထိန်းသိမ်းပါရန်မည်သို့
19-04-24 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
acrylic ငါးတင့်ကားကျယ်ပြန့်မိသားစုအတွက်အသုံးပြုကြသည်နှင့် ပို. ပို. လူတွေအိမ်ထောင်စု acrylic ငါးတင့်ကားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှသတိထားရမှာနေကြသည်။ 1. ပုံမှန် acrylic ငါးအကြံပေးအဖွဲ့ရှင်းလင်းနှငျ့ငါးအကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာအညစ်အကြေးများနှင့်အပျက်အစီးများကို clean up ။ ငါးအကြံပေးအဖွဲ့၏ 2.The မျက်နှာပြင် Tre နိုင်ပါတယ် ...
Cast ကို acrylic စာရွက်ပြီးတော့ Extruded acrylic စာရွက်အကြားခြားနားချက်
19-04-19 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အဆိုပါ extruded စာရွက်, acrylic လုံးလေးများ၏ဖန်ဆင်းဝက်အူ extruder ၏ Hopper တွေလည်းထည့်သွင်း, အရည်ကျိုခြင်းနှင့် extruder အတွက် plasticized, အသေဖွငျ့ extruded, calendered နှင့်တစ်ဦး acrylic sheet.Process ရရှိရန် coated ဖြစ်ပါတယ်: သွန်းသော acrylic ပစ္စည်း - ဝက်အူ extruder - သေဆုံး - ပြက္ခဒိန် -...
acrylic Tube လျှောက်လွှာပြီးတော့ကွိုတငျကာကှယျမှုမြား
19-04-16 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ကဖန်ခွက်ကဲ့သို့တူညီသောင့်လင်းမြင်သာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ acrylic ပြွန်အမှန်တကယ်လည်း plexiglass သမုတ်သောတစ် thermoplastic, သိပ္ပံနည်းကျနာမကိုအမှီ polymethyl methacrylate ဖြစ်ပါသည်။ acrylic ၏တိကျသောထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း, အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ, Non-ပညာရှင်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာသာ, ဤမျှလောက်သိရန်မလိုအပ်ပါဘူး ...
ကြှနျုပျတို့ကိုခန့် acrylic ထုတ်ကုန်များ
19-04-12 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ထို့အပြင် acrylic သို့မဟုတ် plexiglass အဖြစ်လူသိများ acrylic ဓာတုနာမကိုအမှီ PMMA, propylene အရက်၏အတန်းပိုင်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ပါကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကွောငျ့, ထိုကဲ့သို့သောမြို့ပြဒေသများအဖြစ်ပြင်ပကြော်ငြာနှင့်ပြင်ပအလှဆင်ရာတွင်အသုံးပြုကြွပ်ဆတ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုခုခံနှိုင်းယှဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ...
acrylic ရူပ Properties ကို
19-04-08 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
1.Mechanical ဂုဏ်သတ္တိများ acrylic ကောင်းသောပြည့်စုံစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်နှင့်အထွေထွေ-ရည်ရွယ်ချက်ပလတ်စတစ်၏ရှေ့တန်းမှ၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါဆန့ခွန်အားကိုဆန့ခွန်အားကိုချုံ့နှင့်အခြားအားသာချက် polyolefins ၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း, polystyrene နှင့် polyvinyl chlor ၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားနေကြသည် ...
acrylic ငါး Tube Tank
19-04-03 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
acrylic ငါးအကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဦးက high-grade ကိုငါးမွေးကန် product.Common acrylic ပြွန်ကျယ်ပြန့် acrylic ငါးအကြံပေးအဖွဲ့ acrylic များတွင်အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးသို့လုပ်နိုင်ပါသည်။ (စ swatches အပါအဝင်) အရောင်ကြွယ်ဝပြား၏နောက်ထပ်အမျိုးမျိုး, acrylic ၏အခြားဝိသေသတို့သည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ STI နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ...
ဥရောပ acrylic စာရွက် Market ကအားသုံးသပ်ခြင်း
19-03-01 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Insights အဆိုပါဥရောပ acrylic စာရွက်စျေးကွက်အရွယ်အစားထိုကဲ့သို့သောဆိုင်းဘုတ်နှင့်သန့်ရှင်းထည်အဖြစ် applications များအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏တိုးပွားလာထိုးဖောက်မှုစျေးကွက်တိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ရသည် 2016 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,41 ဘီလီယံခန့်မှန်းခဲ့သည်။ acrylic စာရွက်များ, ma ၏သာလွန်ဂုဏ်သတ္တိများ ...
ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - ထုတ်ကုန်များ Featured - Hot Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
Black Acrylic Rod, အကြီးစား acrylic Tube, Clear ကိုက Round acrylic လှံတံ, အစိုင်အခဲကိုရှင်းလင်းရန် acrylic လှံတံ, ပလတ်စတစ်က Round Tube , acrylic လမ်းညွှန်ချောင်းတွေ ,